Koox dagaal kula jirta dowlada Masar oo beyco la gashay dowlada Islaamiga ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Koox dagaal kula jirta dowlada Masar oo beyco la gashay dowlada Islaamiga ah
Mareeg.com: Kooxda Islaamiyiinta ah ee Ansaaru Beytul-muqadas ee dagaalka kula jirta ciidamada dalka Masar ayaa ku dhawaaqday iney beyco la gashay hogaamiyaha dowladda Islaamiga ah Abubakar Al-baqdaadi oo ka taliya qeybo badan oo ka tirsan Suuriya iyo Ciraaq.
Bayaan kooxdan ka soo saartay woqooyiga gobolka Siinaa oo ay kula dagaalamayaan ciidamada Masar ayay Muslimiinta kale ee ku dhaqan Gaza oo Falastiin ah, Masar, Liibiya iyo Bariga iyo Galbeedka Islaamka ugu baaqday iney beyco la galaan Amiirka Dowladda Islaamiga ah.
“Markii aan Alle talo saaranay waxaan maanta go’aansanay inaan beyco la galno Amiirka Muuminiinka Abubakar Alqurashi, Al-xuseyni, Albaqdaadi, kaasoo Amiir u ah Muslimiinta Ciraaq iyo Shaam iyo dhamaan Muslimiinta ku nool dhulalka kale” ayaa kooxdaan ku tiri qoraal ay soo saartay oo Al-jazeera soo xigatay.
Kooxdan la magac baxday Ansaaru Beytul-muqadas ayaa dhowr sano ciidamada Masar kula dagaalamayey gobolka Siinaa, waxeyna dileen tobanaan ka tirsan ciidamada Masar, halka iyagana tiro nuucaas ah laga dilay, sida ay sheegeen ciidamada amaanka Masar.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in kooxdaasi xiriir cusub la sameystay dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Shaam ee uu hogaamiyo Abubkar Al-baqdaadi, arrinkaas oo ay maanta shaaciyeen.